War Deg Deg Ah:- Ciidamada Booliska Gobolka Togdheer Oo Saaka Xabsiga U Taxaabay Sarriflayaal Tiro Badan+Sababta Keentay | Saxil News Network
War Deg Deg Ah:- Ciidamada Booliska Gobolka Togdheer Oo Saaka Xabsiga U Taxaabay Sarriflayaal Tiro Badan+Sababta Keentay
February 8, 2017 - Written by Abdisalaan Harir
Hargeysa(Saxilnews)Wararka hadda naga soo gaadhaya magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer soona gaadhaya xafiiska shabakada wararka Saxilnews ayaa sheegaya in ciidamada booliska gobolka Togdheer ay saaka xabsiga u taxaabeen sarriflayaal tiro badan oo ka dhex shaqaysta gudaha magaalada Burco.
Sababta ay ciidamadu sarriflayaashan xabsiga u taxaabeen ayaa wararka nasoo gaadhayaa ay noogu sheegeen in aanay u hogaansamin go’aankii xukuumaddu kasoo saartay sarrifka lacagaha iyo sicir bararka,waxaana xoguhu xusseen in sarriflayaashani ay lacagaha ku sarrifayeen qaadar lacag ah oo ka badan xaddigii ay xukuumaddu u goysay.
Waxaana sarriflayaashan la xidh xidhay ay 1$ (Halka Dollar) ku sarrifayeen gacanta hore 7500 (Todoba Kun Iyo Shan Boqol) halka ay gacanta danbena ku sarrifayeen 8200 (Sideed Kun iyo Laba Boqol),waxaana ay xukuumaddu u goysay sarrifka lacagaha in gacanta hore lagu sarrifo 1$ (Halka Dollar) 6800 (Lix kun iyo Sideed Boqol) halka gacanta danbena loo gooyey in lagu sarrifo 7000 (Todoba Kun).
Sarriflayaashan ayaan u hogaansamin go’aanka xukuumadda,waxaana arrinkaasi shalay ay sababtay ay ganacsatadii suuqa ku ganacsan jirtay ay albaabada u laabaan goobahoodii ganacsi kadib markii ay garan waayeen xaddi go’an oo ay alaabtoodii ku iibiyaan.
Gabagabadiina ciidamada booliska gobolka Togdheer ayaa la sheegay in lagu soo daadiyey suuq waynaha magaalada Burco kuwaas oo xidhaya sarriflaha lacagaha ku sarrifaya xaddi dhaafsiisan qiimaha ay xukuumaddu u goysay sarrifka lacagaha.